Halkan ku xayeysiiso | Wararka IPhone
Halkan ku xayeysiiso
Haddii ganacsigaagu diiradda saarayo iibinta iPhone-ka, iPod Touch, agabyada iyo / ama codsiyada labada wax soo saar ama nooc kasta oo qalab mobile ah ama adeegyo la xiriira ah, Wararka IPhone waa fursad weyn oo aad ku gaari karto macaamiishaada.
Actualidad iPhone waa websaydhka ugu weyn ee loogu talagalay 100% iPhone Tufaax af Isbaanish ah. La xiriir macaamiisha mustaqbalka ee raadinaya macluumaadka ku saabsan iPhone-ka.
Bil kasta waxaan haysanaa in kabadan 2,5 milyan oo bog ah isticmaalayaasha xiiseynaya iPhone-ka iyo qalabkiisa. Adoo ku xayeysiinaya badeecadaada iyo adeegyadaada boggayaga internetka, waxaad si dhakhso leh oo raqiis ah kula gaari doontaa malaayiin macaamiil macquul ah
Si aad noola soo xiriirto arrimaha ku saabsan xayeysiinta isticmaal foomka soo socda: